Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » CHOP Dhakhaatiirta Qalliinka Kala Saaran Mataanaha Isku-dhafsan ee Hadda Guriga Jooga
Ka dib ku dhawaad ​​hal sano oo daryeelka degdega ah ee Cisbitaalka Carruurta ee Philadelphia (CHOP), 10 bilood jir mataano isku dheggan Addison (Addy) iyo Lilianna (Lily) Altobelli waxaa si guul leh u kala saaray dhakhaatiirta CHOP Oktoobar 13, 2021. Hadda guriga Chicago, Gabdhaha ayaa ku dhashay iyagoo ku xiran caloosha iyo laabta, xaalad loo yaqaan thoraco-omphalopagus twins, taasoo la micno ah inay wadaagaan beerka, diaphragm, laabta iyo gidaarka caloosha.
Koox qalliin oo ay ku lug lahaayeen in ka badan labaatan khabiir oo takhasus leh, oo ay ku jiraan dhakhaatiirta guud, dhakhaatiirta suuxinta, dhakhaatiirta shucaaca, takhtarka qalliinka wadnaha, iyo dhakhaatiirta qalliinka caaga ah, ayaa ku dhawaad ​​10 saacadood kala soocay gabdhaha. Markii mataanaha la kala saaray, kooxda qalliinka ayaa laba u kala qaybiyay, waxayna dib u dhiseen gabadh walba gidaarka laabta iyo caloosha, iyagoo isticmaalaya lakabyo mesh iyo farsamooyin qalliin oo balaastik ah si ay u xasiliyaan ilmo kasta.
"In la kala saaro mataanaha isku xiran had iyo jeer waa caqabad sababtoo ah mid kasta oo mataano ah waa mid gaar ah, dhammaantoodna waxay leeyihiin caqabado kala duwan iyo tixgelinta anatomic," ayuu yiri dhakhtarka sare ee Holly L. Hedrick, MD, oo ah dhakhtarka carruurta iyo dhakhtarka uurjiifka ee Qeybta Guud ee Carruurta , Qalliinka xididada iyo uurjiifka ee Isbitaalka Carruurta ee Philadelphia. "Sida ay u wada shaqeeyaan kooxdayadu, runtii waa wax cajiib ah oo gaar ah, iyadoo dad badani ay isu yimaadaan si ay uga shaqeeyaan ujeedo guud. Addy iyo Lily si fiican bay u shaqaynayaan, rajadayaduna waa inay helaan nolol buuxda oo farxad leh. "
Laga soo bilaabo ogaanshaha ilaa bixinta
Addy iyo Lily safarkoodu waxa uu bilaabmay markii la ogaaday in ay dhaleen ka hor ballantoodii 20-usbuuc ee ultrasound-ka. Ballantaas ka hor, waalidiinta Maggie iyo Dom Altobelli waxay u malaynayeen inay hal ilmo dhalayaan, laakiin sawirka ultrasound ayaa muujiyay in aanay Maggie kaliya qaadin laba uurjiif balse ay sidoo kale ku dheggan yihiin caloosha.
Mataanaha isku dheggan waa naadir, kuwaas oo ku dhaca qiyaastii 1 keliya 50,000 oo dhalasho ah. Lamaanaha ayaa loo gudbiyay CHOP si loo qiimeeyo, maadaama isbitaalku ka mid yahay kuwa yar ee dalka ku nool oo khibrad u leh kala saarida mataanaha isku dheggan. In ka badan 28 lammaane oo mataano isku dheggan ayaa lagu kala soocay CHOP ilaa 1957, waana inta ugu badan isbitaal kasta oo dalka ku yaal.
Lamaanuhu waxay la kulmeen khabiiro ku takhasusay CHOP's Richard D. Wood Jr. Xarunta Cilad-sheegidda iyo Daawaynta uurjiifka, halkaas oo Maggie lagu sameeyay baadhitaano badan oo dhalmada ka hor si loo go'aamiyo haddii ay suurtagal tahay in la kala saaro mataanaha, iyadoo lagu saleynayo isku xirnaanta iyo anatomy la wadaago. Dhakhaatiirtu waxay ogaadeen in inkasta oo gabdhuhu ay wadaagaan laabta iyo gidaarka caloosha, diaphragm, iyo beerka, mataanaha ayaa kala gooni ah, qalbiyo caafimaad qaba. Beerka ay wadaagaan ayaa sidoo kale ahaa mid weyn oo ku filan inuu u kala qaybiyo iyaga, taas oo ka dhigaysa musharaxiin heer sare ah oo qalliinka kala soocida.
Ka dib bilo la qorsheynayay gaarsiinta khatarta sare leh iyada oo loo sii marayo qaybta C, oo ay hogaamiso Julie S. Moldenhauer, MD, Agaasimaha Adeegyada Uurka, Addy iyo Lily waxay ku dhasheen Noofambar 18, 2020 Qaybta Bixinta Gaarka ah ee Qoyska ee Garbose (SDU), CHOP qaybteeda bukaan-jiifka. Waxay afar bilood ku qaateen Cutubka Daryeelka Degdegga ah ee Dhallaanka/Ilamaha Dhashay (N/IICU), oo ay ku xigtay lix bilood Unugga Daryeelka Degdegga ah ee Carruurta (PICU). CHOP takhtarka qalliinka caagga ah David W. Low, MD, la geliyey balaadhinta maqaarka si uu u kala bixiyo maqaarka gabdhaha isu diyaarinta qalliinka kala soocida. Sida buufinnada yaryar, ee burbursan, balaadhinta maqaarku waxay si tartiib tartiib ah ugu fidaysaa irbado, iyaga oo si tartiib ah u kala bixinaya maqaarka waqti ka dib si ay gabadh kastaa u hesho maqaar ku filan oo uu ku daboolo derbiga laabta iyo caloosha ka dib marka la kala saaro.
Marka mataanaha ay xasiloon yihiin oo uu jiro maqaar ku filan daboolitaan ku filan kala-goynta ka dib, waxay diyaar u ahaayeen qalliin. Hal bil ka hor qalliinka, kooxda qalliinka ayaa kulmi jirtay toddobaad kasta, iyagoo dib u eegis ku sameynaya sawirada ultrasound-ka marar badan si ay u daraaseeyaan dhiigga ku jira beerka gabdhaha, si ay u sawiraan socodka dhiigga iyo halka ay xididdada habluhu ka gudbaan. Khabiirada shucaaca ee CHOP waxay abuureen moodooyin 3D ah, kuwaas oo la isugu keenay sida qaybaha Lego®, si kooxda qaliinka ay u fahmaan xidhiidhka hablaha ee jidhkooda la wadaago oo ay ku celceliyaan qaliinka iyagoo ku guda jira jimicsiyo, sida ku celcelinta labiska maalinta qaliinka.
Oktoobar 13, 2021, ka dib bilo isdiyaarin ah, Addy iyo Lily waxaa lagu sameeyay qalliin 10 saacadood ah waxaana si rasmi ah loo kala saaray 2:38 pm Radiology ayaa gacanta ku hayay intii lagu jiray qaliinka si loo sawiro qaababka beerka ee muhiimka ah ee ultrasound. Markii hablihii la kala saaray, kooxdii qalliinka ayaa laba u kala qaybisay, waxaanay u hawlgaleen sidii ay gabadh kasta u dejin lahaayeen, dibna ugu dhisi lahaayeen gidaarka laabta iyo caloosha. Stephanie Fuller, MD, oo ah dhakhtar wadnaha wadnaha ah, ayaa isku xidhay hablaha patent ductus arteriosus wuxuuna hubiyay in labada qalbi ee gabdhuhu ay ku jiraan booska saxda ah oo si fiican u shaqeynaya. Dhakhaatiirta balaastigga ah waxay dul dhigeen laba lakab oo mesh ah - mid ku meel gaar ah, mid joogto ah - waxay dul saareen labada mataanaha ee gidaarada caloosha iyo laabta ka dibna waxay ku dabooleen maqaarka oo soo baxay bilo ka dib markii habluhu ku jireen PICU.
Markii gabdhuhu ay ka maqnaayeen qaliinka, Maggie iyo Dom waxay arkeen gabdhahooda oo kala tagay markii ugu horeysay.
"In aan ku arko iyaga oo jidhkooda wata - jidhkoodu aad buu u qummanaa - waxay ahayd wax cajiib ah," ayay tiri Maggie. "Waxay ahayd wax aan la sifayn karin."
Home for Fasaxyada ee
Diseembar 1, 2021, Altobellis wuxuu ugu dambeyntii u duulay guriga Chicago - hal mataano ah markiiba, oo leh hal waalid - ka dib markii ay ku noolaayeen Philadelphia in ka badan hal sano. Mataanahan waxa ay laba toddobaad ku jireen cusbitaalka Lurie Children’s Hospital oo ay gacanta ku hayeen kooxda caafimaadka ee ka taageeri doonta meel u dhow guriga. Gabdhaha ayaa la sii daayay waqti ku dhow Christmas-ka waxayna yimaadeen guriga si ay u helaan deyrkooda oo deriskooda qurxiyay. Waxay ku wada qaateen fasaxa guriga iyagoo qoys ah oo afar ka kooban.
Addy iyo Lily labaduba waxay weli haystaan ​​tuubooyinka tracheostomy iyo hawo-mareenada si ay uga caawiyaan neefsashadooda, maadaama ay u baahan doonaan wakhti ay ku yeeshaan muruq oo ay la qabsadaan neefsashada keligood. Waqti ka dib, waxaa laga jari doonaa hawo-mareenada.
"Waxaan bilaabaynaa buug cusub - xitaa cutub cusub maaha, waa buug cusub," ayuu yidhi Dom. "Waxaan u bilownay hablaha buug cusub, waxaana jira buug Addy, waxaana jira buug Lily ah."
Chicago Christmas Qoyska Hospital Philadelphia